Nnwom 129 - Nkwa Asem (NA-TWI) | Biblica
Nnwom 129 - Nkwa Asem (NA-TWI)
Mpae a wɔbɔ tia Israel atamfo
1Israel, ka efi wo mmofraase, taa a w’atamfo ataa wo, nanso wɔantumi anni wo so kyerɛ yɛn. 2 “Efi me mmofraase, m’atamfo ataa me atirimɔden so, nanso wɔantumi anni me so.
3 “Wotwaa kam kɛse te sɛ asase a wɔafuntum wɔ m’akyi. 4 Nanso Awurade, ɔtreneeni no, agye me afi nkoasom mu.”
5 Obiara a ɔtan Sion no, wobedi ne so na wɔapam no asan n’akyi. 6 Ma wɔn nyinaa nyɛ sɛ sare a enyin wɔ adan atifi ma ewu no; 7 Obiara mmoaboa ano, na obiara nsoa no afiafi nkɔ. 8 Obiara a obetwam wɔ hɔ no renka se, “Awurade nhyira mo! Yehyira mo wɔ Awurade din mu.”
NA-TWI : Nnwom 129